Mara ọkwa nke iOS 9 na Apple si Worldwide Mmepụta si Conference ke San Francisco ka edemede mmasị n'etiti Apple Fans. Mgbe Apple ka a mara ọkwa dị oké mkpa na-akpali atụmatụ na ndị ọhụrụ na ngwaọrụ na software nkwa inye, na onye na-bụ ịrịba bụ ogologo ndụ batrị nke Apple ngwaọrụ. Ma tupu anyị na-awụlikwa elu otú iOS 9 na-aga ime ya, ka anyị tụlee ihe a nnọọ ajụjụ dị mkpa.
Gịnị mere ndị mmadụ na-eche banyere batrị ọzọ?
N'ihi na otu onye, ​​ọ na-enyere ha ka ha ghara iche banyere etinye ha na ekwentị ma ọ bụ ngwaọrụ-ana ọ bụla mgbe a na mgbe ma ọ bụ iche banyere batrị drainage mgbe egwu na-akpọ ha mmasị egwuregwu.
Nkà na ụzụ na ngwa ngwa na-agbanwe agbanwe taa ke tech ụwa, na-atụle na 512 MB Ram e weere 'zuru ezu' ọbụna afọ ise azụ - taa, ị na-na na ntị na 4 Giga bytes Ram na-apụta na ị ga-achọ gị ntị na-ngwa ngwa. Processor kpụ ọkụ n'ọnụ aga-eme na a dum usu ọhụrụ ngwa gbanwere ụzọ anyị emekọ anyị ngwaọrụ. Fast processors, elu definition ngosipụta, na ezigbo ichekwa nchekwa na ngwaọrụ - idebe ihe niile a na-aga, e nwere obere ihe na-akpọ 'batrị', ihe ike isi iyi nke ekwentị.
Ke adianade niile oké atụmatụ, gị mgbe niile na anya maka batrị nke ngwaọrụ - ọtụtụ igwe-abịa na ike nke 3,000 Mah ma ọ bụ karịa taa. Ngwa mkpa a na-aga n'ihu ike isi iyi, na ị na-achọghị batrị gị na-agba ọsọ nke ihe ọṅụṅụ, karịsịa mgbe ị na-na aga ma ọ bụ na-arụ ọrụ na ihe oké mkpa. Ekwentị gị igwefoto, Ịgba Cha Cha ngwa ọdịnala na ị na-egwu na, oge ị na-eji Whatsapp na Facebook, ihe niile agbatị ruo akụkọ na ike ndụ batrị nke a smartphone bụ nnọọ oké mkpa. Nke a bụ isi ihe mere i ji, m na ndị ọzọ niile na smartphone ọrụ na ụwa na-elekọta banyere batrị ọzọ.
Olee otú a ga iOS 9 melite ndụ batrị?
Na-eju anya ezu, nke a bụ otu atụmatụ nke ọhụrụ iOS 9 na Apple kwughị banyere n'ụzọ kwesịrị ekwesị na WWDC nke afọ a. iOS 9 yiri iji melite ndụ batrị nke ngwaọrụ ọ dịkarịa ala site 1 hour, na ruo 3 awa mgbe 'Low Ike' mode na-nyeere. N'ikpeazụ, Apple abịa na ihe a na-jụrụ site iPhone na iPad ọrụ bụla ugbu a na mgbe ahụ. The 'Low Ike' na-eme amachi ojiji nke Apple ngwaọrụ ruo n'ókè ụfọdụ, ma ndị isi atụmatụ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ka nkịtị. Ka ihe atụ, na ala ike mode, gị e-mail ikutere na ekwentị ga-akpaghị aka Switched ntuziaka, ndabere ngwa downloads ga-nkwarụ, na ihie, netwọk ọsọ na ngagharị nke ngwaọrụ ga-ebelata. Ọ nwere ike na-akpọ yiri àjà na mbụ e mere site Samsung na HTC, ma nke a anaghị aga kwa anya ókè dị ka ikpeazụ abụọ.
A n'ọnọdụ nke otú ihe na-arụ ọrụ otú anya nwere ike hụrụ site na ile batrị ọnụ ọgụgụ nke iOS 8. iOS 8, batrị nke ihe iPhone 6 dịruru ruo 14 awa na 3G maka okwu oge, 11 awa na Wi-Fi , 11 awa maka HD video playback na 50 awa maka music playback. Na iOS 9, e nwere ike amịpụtara ihe mmezi 3-hour kwushin, ọ bụ ezie na ndị ọchịchị si Apple adịghị kpọmkwem kpọmkwem nke 3 awa na ha na-ekwu banyere. Anyị ga-achọpụta ya anya dị ka iOS 9 na-apụta si.
Apple, na ya ukara tọhapụ banyere ndị iOS 9, na-ekwu na ya website na:
"Gburugburu dum sistemụ, ngwa ọdịnala na isi teknụzụ e mere ihe oru oma ka ewepụtụ batrị ojiji n'ebe ọ bụla o kwere omume - ya mere ị ga-esi ọzọ ndụ batrị maka ihe ị na-eme kwa ụbọchị. Ekele ihere ìhè na idi nso sensọ, gị iPhone maara ma ọ bụrụ na ọ bụ ihu-ala na tebụl na-egbochi ihuenyo site mbịne on, ọbụna mgbe ị na-enweta a akwụkwọ. Na ọhụrụ Low Ike mode na-ahapụ gị iru gị ndụ batrị ọbụna n'ihu. "
Apple ka ọ bụla nkọwa ka otú a na-abawanye nke batrị, e mewo ka o kwere omume, ma otu ihe nke a bụ n'ihi na ojiji nke sensọ. Nke a bụ atụmatụ ji Apple esonụ edoghi nke Android M. iOS 9 na-eji ihere ìhè na idi nso sensọ nke ngwaọrụ gị, n'ihi na ihe atụ, ọ bụghị-enye ìhè ekwentị ihuenyo on a akwụkwọ, ọ bụrụ na ekwentị a nọ ihu ala.
Ọ ga-bara uru?
Kwa afọ, Apple abịa na ihe na-eme ka onye ọ bụla gbanwee ha eyeballs na ya. Afọ a, biakwa obibia nke iOS 9 na-atụ anya ime ka ndị mmadụ na-eche ya edidu. The 'Low Battery' atụmatụ nke usoro na n'ezie-aga na-ere maka Apple ọrụ, dị ka e emeziri mkpesa banyere batrị nke iPhones na-ṅụsịa nnọọ ngwa ngwa. Ọzọkwa, na enwekwukwa ojiji nke sensọ nke ngwaọrụ, iOS 9-ekwe nkwa inye otu ahụmahụ dị ka mgbe n'ihu. Otú ọ dị, ọ ka na-anọgide na-hụrụ otú ọ ga-akara na ahịa, nke ga-doo anya site na-esote ego nkeji iri na ise ma ọ bụ otú ahụ.
> Resource> iOS> iOS 9: Ga batrị Life-akp?